ADW Theme ColorWarp Lite ကို APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » themes » ADW Launcher ကို Themes » ADW Theme ColorWarp Lite ကို
ADW Theme ColorWarp Lite ကို APK ကို
ADW Theme ColorWarp Lite ကို
*** ဒေါင်းလုပ်မပြုလုပ်ခင်ဒီနည်းကိုဖတ်ရှုပါ !!! ***
သင် ADW.LAUNCHER OR ADW Launcher EX ဒီနည်းကိုအဓိကအကွောငျးအရာကျင့်သုံးပါပထမ installed ရှိရမည် !! (အင်္ဂလိပ်လိုထပ်မံညွှန်ကြားချက်အဘို့အဆင်း scroll သူတို့ကိုဖတ်ရန်ပါ)
အထူးဂရုပြုရန်: ဒီ app ကိုပြုလုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကို run မထားဘူး။ themes "ဖွင့်" သို့မဟုတ် "ပစ်လွှတ်" ပါဘူး။ ဒီ app ဟာ app ကို '' ADW.Launcher '' ဗားရှင်း 1.3 + OR '' ADWLauncher EX '' များအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, သင်သည်ဤဆောင်ပုဒ်လျှောက်ထားရန်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ် ADW လိုအပ်ပါတယ်!
သငျသညျ ADW.Launcher သို့မဟုတ် ADWLauncher EX သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ကို install ပြီးတာနဲ့, ထိုအခါသင်သည် Menu ကိုမှသွားနိုင်ပါတယ်> ADWSettings> Themes Preferences ကို> သင့်ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ> (သင်မည်သည့်ဆောင်ပုဒ် / သငျသညျကို select နှင့်လျှောက်ထားရန်ဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ့်မြင်ရပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာဤတွင်ဖြစ်ပါတယ်) ။
အဆိုပါစျေးကွက်အတွက် ADW Launcher ကိုနေရာချထားမပေးနိုင်ပါသလား? app ကို၏အမည်ကိုတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ဈေးကွက်ထဲမှာ '' Anderweb ': အစား dev နာမတော်ဖြင့်ရှာဖွေမှုလုပ်ပါ။
သင့် application icon များအားလုံးအပေါ်အရောင်များ -Inverts! (မ Widgets တွေ)
-Donate ဗားရှင်းကိုအောက်တွင် "View ပို Applications ကို" ပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာစိတ်တိုင်းကျ Shortcuts နှင့်အတူသုံးစွဲဖို့အတော်ကြာထုံးစံနောက်ခံပုံများနှင့်တစ်ဦး inverted အိုင်ကွန် Pack ကိုပါဝင်သည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 9, 2014 မှာ 9: 42 ညနေ
z amazinggggggggggggg up ပြုလုပ်စောင့်ရှောက်နေသည်
အောက်တိုဘာလ 28, 2013 မှာ 3: 55 ညနေ
Nice (Y ကို)
အောက်တိုဘာလ 17, 2013 မှာ 1: 18 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 4, 2013 မှာ 8: 06 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 7, 2013 မှာ 3: 43 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 5, 2013 မှာ 3: 48 ညနေ
သိပ္ပံသတင်းနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ - အဲန်အက်ဖ်